Nanao fihetsiketsehana isak’alina ny Hongroà hanoherana ny rafi-pitsarana vaovao sy ilay antsoina hoe “Lalànan’ny Fanandevozana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2019 8:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Português, 繁體中文, English
Fihetsiketsehana teo anoloan'ny Parlemanta Hongroà tao Budapest ny 13 Desambra 2018. Sary avy amin'i Atlatszo.hu / Márk Tremmel, CC BY-NC-SA 2.5.
Ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ilay tantara hoe “Hetsika Hongroà manohitra ny governemanta eo anoloan'ny Parlemanta isaky ny hariva” nosoratan'i Anita Kőműves, ahitana sary avy amin'i Márk Tremmel sy i Áron Halász ao amin'ny Atlatszo.hu, fanaovan-gazety fanadihadiana voalohany tsy mitady tombontsoa ara-bola any Hongria. Navoaka teto izany noho ny fiarahamiasa amin'ny Global Voices.
Nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny lapan'ny Parlemanta sy nanerana an'i Budapest ny Hongroà hatramin'ny nandanian'ny antoko elatra ankavanana an'i Viktor Orbán ny volavolan-dalàna ahafahan'ireo mpampiasa mitaky asa fanampiny 400 ora isan-taona amin'ny mpiasa sy volavolan-dalàna mety hanamora ny fitoriana iarahana amin'ireo mpitsara tsy mivadika amin'ny antokon'i Orbán. Na dia teo aza ny andro mangatsiaka, dia nivoaka teny an-dalambe hatramin'ny mihoatra sasakalina ireo mpanao fihetsiketsehana isak'alina – hetsika izay itsenana ny baomba mandatsa-dranomaso avy amin'ny polisy.
Nandany volavolan-dalàna roa lehibe ny Parlemanta Hongroà tamin'ny alarobia (16 des). Na dia nanohitra ireo volavolan-dalàna roa ireo aza ny antoko mpanohitra, afaka nandany ilay antsoina hoe ‘Lalànan'ny fanandevozana’ sy lalàna iray manangana rafi-pitsarana vaovao ny vondrona anjakan'ny antokon'ny fitondrana elatra ankavanana mpandala ny nentin-drazana Fidesz (Fiarahana Sivika Hongroà) .
12 Desambra 2018 – Nanaitra ny maro an'isa ny mpanohitra ao Hongria. (eo am-piandrasana)
Hisaraka tanteraka amin'ny rafi-pitsarana ankehitriny ny fitsarana ara-panjakana vao noforonina. Ny minisitry ny fitsarana no hanaramaso azy ary manamora ny fampidirana ireo mpitsara tsy mivadika amin'i Fidesz ao amin'ny fitsarana ny fitsipika. Afaka manapaka amin'ny raharaha ara-politika saro-pady, toy ny kolikoly sy ny lalàm-pifidianana ary ny fahalalahana hivory ny fitsarana ara-panjakana.
Polisy milahatra eo anoloan'ny parlemanta ao Budapest, Hongria. Sary avy amin'ilay raki-tsarin'ny alin'ny hetsi-panoherana voalohany, avy amin'i Atlatszo.hu / Márk Tremmel, CC BY-NC-SA 2.5. Kitiho ny sary hijerena rakitsary.
Ilay antsoina hoe ‘Lalàna fanandevozana’ dia hampiakatra ny asa fanampiny isan-taona 250 ora ho 400 ora. Ankoatra izany, ny mpampiasa dia omena hatramin'ny telo taona handoavana ny asa fanampiny.
Araka ny lalàna, mila manaiky ny ora fanampiny an-tsoratra ireo mpiasa, saingy milaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa hahatonga ny mpiasa ho tsy hanan-tsafidy afa-tsy ny manaiky ny fitsipika vaovao ny fanerena ataon'ny mpampiasa.
Ny alina telo voalohany tamin'ny fihetsiketsehana
Fihetsiketsehana teo anoloan'ny parlemanta tao Budapest, Hongria. Sary avy amin'ny raki-tsarin'ny alin'ny sabotsy tamin'ny fihetsiketsehana faharoa, avy amin'i Atlatszo.hu / Áron Halász, CC BY-NC-SA 2.5. Kitiho ny sary ijerena rakitsary.
Hatramin'ny nandaniana ny volavolan-dalàna, nisy ny hetsi-panoherana natao teo anoloan'ny Antenimiera, ary an'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana nandeha teny an-dalamben'i Budapest ka nihiaka mafy ny teny filamatra manohitra ny governemanta, ary nanakana vetivety ny lalana sy ny tetezana. Niverina tao amin'ny Lapan'ny Parlemanta ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nihiaka teny filamatra teo anatrehan'ny polisy misahana ny rotaka.
Na dia teo aza ny andro mangatsiaka sy ny oram-panala tamin'ny alin'ny zoma, dia mbola nivoaka teny an-dalambe hatramin'ny 1 na 2 ora maraina isa-maraina ireo mpanao fihetsiketsehana .
Maro ireo mpanao fihetsiketsehana notànana nandritra ny alin'ny fihetsiketsehana faharoa taorian'ny fandanian'ny governemanta Orbán ny #SlaveryLaw. Ao amin'ny tobin'ny polisy ny filoha lefitry ny Momentum amin'izao fotoana izao, tsy nekena ny fahazoany mpisolovava hatreto, araka ny tatitra avy amin'i @hvg_hu. Sary #Budapest #Hungary
Tsy tahaka ireo hetsi-panoherana tamin'ny taona lasa, nampiasa baomba mandatsa-dranomaso ny polisy nandritra ireo fihetsiketsehana ka nahatezitra ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nandefa baomba mandatsa-dranomaso tamin'ny vahoaka izy ireo
Nampiasa baomba setroka ireo mpanao fihetsiketsehana, nandoro mosoara sy gazety ary vaky ny varavarankely iray tao amin'ny Parlemanta noho ny vato natoraky ny mpanao fihetsiketsehana iray
Hetsi-panoherana tao Budapest, Hongria. Sary avy amin'ny rakitsary tamin'ny alina fahatelo amin'ny hetsi-panoherana, avy amin'i Atlatszo.hu / Márk Tremmel, CC BY-NC-SA 2.5. Kitiho ny sary ijerena rakitsary feno.
Nitohy ny hetsi-panoherana ny Alahady tolakandro tao amin'ny Kianjan'ny Maherifo. Nilaza fa hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana ireo fikambanan'ny mpianatra, ny antoko mpanohitra, ary ny sendikà.
Olom-pirenena an'arivony no manao hetsi-panoherana ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana noho ity fampielezan-kevitra mitohy ity
Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny foiben'ny televizionam-panjakana ny polisy. Nanadihady ny fivoaran-draharaha i Atlatszo.hu tamin'ny famoahana lahatsary mivantana avy amin'ny sehatra tao amin'ny Facebook.